इरानकाे एक हमलाले इन्धन र सुनकाे मुल्य अाकासियाे । बिश्व चिन्तित । नेपालकमा कस्ताे प्रभाव पर्ला ? - Maxon Khabar
Home / News / इरानकाे एक हमलाले इन्धन र सुनकाे मुल्य अाकासियाे । बिश्व चिन्तित । नेपालकमा कस्ताे प्रभाव पर्ला ?
इरानकाे एक हमलाले इन्धन र सुनकाे मुल्य अाकासियाे । बिश्व चिन्तित । नेपालकमा कस्ताे प्रभाव पर्ला ?
२०७६ पुष २३ - एेजेन्सीहरू - इराकमा रहेको अमेरिकी सैनिक अड्डामा ईरानले पनी मिसाइल हमला गरेपछि कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धिसँगै कतै मध्यपूर्वमा तेलको निर्यात नै बन्द हुने त होइन ? भन्ने सबैमा काैतुहलता बनेकाे छ । साे कारबाही पछी तेलकाे मुल्य संगै सुनको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको छ ।
जस अनुसार सुनकाे मुल्यमा नैपाल मा त एेतिहासिक रेकर्ड नै कायम भएकाे छ । एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा २ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र प्रति ब्यारेलको ६९ दशमलव ९४ डलर पुगेको हाे । साथै ईरानको आक्रमण पछि अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारमा पनी नकारात्मक प्रभाब देखिएन गएकाे छ ।
त्यस्तै हङकङको हेंग शेंगमा १ प्रतिशतले गिरावट आएको छ जापानको निकेईमा पनी २ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । इरानले गरेकाे साे हमला पछी हरमुज क्षेत्र भएर विश्वभरमा हुने तेलको निर्यात रोकिन सक्ने सम्भावना रहेकाे एजेन्सीहरूले जनाएको छ । स्मरण रहाेस इराक, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतमा तेलको निर्यात हरमुज (यही मार्ग) भएर हुने गर्दछन । साथै ईरानले पनि अत्याधिक तेलको निर्यात यही मार्ग मार्फत गर्ने गरेकाे छ ।
ईरानको खतरनाक आक्रमणपछि अमेरिकी एभिएशन रेगुलेटर फेडरल एभिएशन अथोरिटी (एफएए) ले अमेरिकी यात्री बोक्ने जहाजलाइ इराकको साे हवाई सीमाबाट नउड्न निर्देशन दिइसकेकाे छ । साथै साे हमला पछी यसको असर भारतलाई पनी पर्ने देखिएको छ भारतलाइ असर पर्ने बितिकै त्यसकाे प्रभाव नेपालमा पनी स्वत पर्नेछ । भारतले प्राय अमेरिका र रुसबाट तेल आयात गर्दै आइरहेको छ । तर भारत सबैभन्दा धेरै तेल मध्य पूर्वका देशबाट आयात गर्छ, जसमा इराक नै एक नम्बरमा रहेकाे छ । त्यसपछि साउदी अरब, ओमान र कुवेत बाट पनी भारतले इन्धन ल्याउने गर्छ ।